:Bọchị: Disemba 15, 2019
Emelitere Usoro Ọzụzụ Zonguldak Karabuk; Insgbọ ndị a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'etiti Zonguldak> Karabük> Zonguldak. Tragbọ ndị a bụ Zonguldak, Kapuz, Inagzi, Kilimli, Catalagzi, Isikveren, Kazkoy, Muslu, Göbü, Turkali, Filyos, [More ...]
Ndokwa Usoro Ọdọ Mmiri adọtara adọta mmasị dị ukwuu site n'aka ụmụ amaala; CDgbọ njem TCDD Co. 7. Onye njikwa mpaghara Murat Selet na onye njem Njikwa Mustafa Çelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. 3.Habil Manager Habil Emir na Onye Njem [More ...]
Urslọ azụmahịa na ụlọ ọrụ Bursa na-agbakwunye ike na mbuba nke ụlọ ọrụ nwere ọrụ Ur-Ge. Ọ bụ ezie na ndị otu mpaghara Ur-Ge Project mụbara ndị na-ebubata ya site na pasent 3 n'ime afọ atọ gara aga, ọrụ amalitela n'ọrụ ọhụrụ nke Ur-Ge. [More ...]
Gbọ okporo ígwè na-ebu ibu dara ọkwa na-abanye na Kars. Mkpo 400 nke ụgbọ ala na-agbagharị ndị 3 nwụrụ na ihe mberede ahụ. NUMgbọ okporo ígwè 3033-847, nke na-aga Kars-Erzurum, nọ n'ogo larịị n'obodo nta nke Alisofu. [More ...]
Nnyocha siri ike nke isagbọ njem Ọha; Ndị otu ndị uwe ojii nke oflọ Ọrụ Ọdụ Ndị Isi Obodo Manisa na-aga n'ihu nyocha ha maka ụgbọ ala na-enye ọrụ ụgbọ njem ọha na eze na ógbè niile. N'ọnọdụ a, mpaghara Turgutlu [More ...]
Emegoro atumatu a na-eme n’afọ 1948-1957 dị ka ebe dị mma maka teknụzụ ndị na-ewu okporo ụzọ n’obodo anyị, n’otu oge ahụ, mmemme ahụ edugala ntopute nke na-agba ume nkeonwe. Ihe ịga nke ọma nke mmemme [More ...]
1923 - 1940 Turkey Railways History; Iwu ụgbọ ala, nke ebumnuche iji wuchie obodo ahụ na arịlịka, abụrụla otu n'ime isi ihe dị mkpa na usoro nke ịmepụta ahịa mba. Mweghachi nke usoro ndị a bibiri n'oge agha ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị ala [More ...]
Thezọ ọzọ agbakwunyere na ọpụpụ Izmit Beach Car Park kwere ka ugboala pụọ ​​karịa mfe. Obodo Kocaeli mepere emepe, nke emeela ọtụtụ ọrụ iji belata okporo ụzọ, na-aga n'ihu na-ahazi ya na mpaghara obodo. Metropolitan [More ...]
Onu ogugu nke Kocaeli Obodo Na –ebuchi na Njikwa okporo ụzọ a na-enye ụmụ amaala N'ime oke a, kaadị ndị isi nke Central Travel, Mimar Sinan overpass n'ụsọ osimiri [More ...]
Ihe owuwu ụgbọ okporo ígwè mbụ gafee otu kọntinent malitere na United States na 1863 wee wuchaa ya na Mee 1869. Egosi nke Eme Whitney gosiputara echiche nke iwu uzo okporo uzo ugboala na 1845. Ihe dị mkpa Abraham Lincoln [More ...]
Taa na History 15 Disemba 1912 Rad-su-Aleppo-Tripoli (203km) mepere ahịrị n'okporo ụzọ Anatolian Baghdad. 15 December 1917 Crown Prince Vahidettin na Mustafa Kemal Pasha batara na Germany site na Sofia-Budapest-Vienna n'ụgbọ njem ụgbọ ala nke na-ejikọ ụgbọ oloko Balkan [More ...]